Download Zawgyi Font and Firefox Browser | U.N.O.B
Zawgyi Font for MAC (Apple)
Zawgyi Font for Windows
Zawgyi Font for An iPhone
Download Zawgyi Font and Firefox Browser
Downloads, Help, Zawgyi Font (Windows)
Zawgyi Unicode Installer(Burmese) Windows 7/Vista 32-64 bit compatible (write/view)
Zawgyi Font (viewable only)
After downloaded, Double Click on Downloaded Font file, and at the very top, click on “Install Font” button [OR] copy downloaded Font file and paste it into “Fonts folder” (Start>Control Panel>Fonts).
Web page ပေါ်တွင်ဗမာလို မြင်ရရုံအတွက်သာဆိုလျှင် ဤ Zawgyi Font ကိုယူပါ။ Download လုပ်ပြီးလျှင် Copy လုပ်၍ Control Panel>Fonts folder ထဲကို Paste လုပ် ထည့်ပေးပါ။ တစ်ချို့ Unicode ကို Installed လုပ်ပြီးသော်လည်း ဗမာစာမမြင်ရပဲ အခက်အခဲရှိနေသေးလျှင် ဤနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
Zawgyi Keyboard layout (လက်ကွက်ပုံစံ)
Direct Link : http://unobusa.org/wp-content/uploads/2019/01/Zawgyi-Keyboard-Layout-1125×650.jpg
This font is designed for the PCs, if you are looking Zawgyi Font foraMAC OSX (Apple Computer) please go to this page.
Firefox Internet Browser
About the Author: Aung
min yoongi December 16, 2019 at 10:21 am Reply
ကျနော်zawgyi fontဘယ်လိုထည့်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ် ကျနော်ကwindow pcသုံးတာပါ
ko September 3, 2019 at 11:05 pm Reply
cant see mm font at telegram app
moonstiller July 13, 2019 at 5:53 am Reply
excel မှာ zawgyi font နဲ့ မြန်မာလို့ ရိုက်လို့ရတယ်။ သို့ပေမယ့် open file လုပ်တဲ့အချိန် မှာ မြန်မာလို မှတ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေက လေးဒေါင့်ကွက်တွေပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလဲဗျ
HPA July 7, 2019 at 11:10 am Reply
I can only use Zawgyi-One as english font and ctrl shift doesnt work. How can I fix it?
Hay Thi Han Lyn February 13, 2019 at 2:41 am Reply
Thanks u so much. It works!!
ီDica Mon November 5, 2018 at 12:24 am Reply
အရမ်း ကို အသုံးတည့်တဲ့ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
Dar love June 7, 2019 at 6:57 am Reply
Min Oo August 6, 2018 at 2:47 pm Reply
Default Browser automatic ပွင့်ပွင့်မလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ?
Admin August 6, 2018 at 2:51 pm Reply
Windows 10 ( Setting > Apps > Default Apps > Web Browser – change it whatever you would like )
Zaw Aung June 21, 2018 at 12:56 am Reply
ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာက windows 10 pro (Version 1803 ပါ Successfully installed on ‎26/‎05/‎2018 ပါ) ကွန်ပြူတာ တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ Microsoft office 2016 (စမ်းကြည့်ပြီ word and excel) မှာ zawgyi font နဲ့ ရိုက်ရင် စာမမှန်တော့တာပါ အရင်က မှန်ပါတယ် windows update လုပ်ပြီးနောက် မမှန်တော့ပါ (ထင်တာပြောပါသည်) မှန်အောင် ဘယ်လို့ လုပ်ရမလဲ ခင်ဗျာ ။
Admin June 21, 2018 at 8:09 am Reply
ပြန်ပြီး install လုပ်ကြည့်ပါ တခြား မြန်မာမာ font တွေ font folder ထဲကနေ ဖယ်ထုတ်ပြီး စမ်းကြည့်ပါ ဘာ font နဲ့ ညိပြီး ပြသနာ ဖြစ်နေလဲ သိအောင်လို့ပါ
Nyein Nyein Ei May 31, 2018 at 11:56 pm Reply
မြန်မာဖောင့်ကနေ အင်္ဂလိပ်ဖောင့် ပြောင်းရင် မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ko kyaw zay ya April 17, 2018 at 9:04 pm Reply
Now I use Microsoft surface rt. How I install zawgyi font to my machine. Please help me.
Ma Win Min Thant August 30, 2019 at 5:47 am Reply
Viber မှာ မြန်မာ font ရိုက်ရင် ကျနော် ရိုက်ရင် ဂျာနေ်ာ ဖြစ်နေပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင့်
U Win Maung June 19, 2017 at 10:36 pm Reply
Samsung Chrome Book မှာ မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းနည်းလေးပြောပြပေးပါခင်များ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Admin June 22, 2017 at 8:31 am Reply
ကျွန်တော့်မှာ Chrome Book မရှိတော့ စမ်းကြည့်ဖို့ အဆင်မပြေပါ ၊ Sorry
ko phyo February 23, 2018 at 11:41 am Reply
Aye Myint January 7, 2017 at 3:10 pm Reply
I’m trying to figure out how to install this on my sister’s PC because she is having trouble installing it. I don’t know how to speak Burmese. Is there, by chance, more detailed installation instructions in English? Also, will it work on Windows 8.1?
Admin January 7, 2017 at 9:05 pm Reply
In Windows 8, please make sure you install this in Desktop Mode. Actually very simple, (1) download Zawgyi Font and Double Click on it. It will pop up Font Preview box, at the very top, you will see “Install Font” button, just click it to install that font. Just to able to see Burmese Font, you don’t need to install Keyboard, but if you want , please do Step 2. (2) Download Unicode Keyboard installer, double click on downloaded file, then again Double Click on “Setup” file. It will install Zawgyi Keyboard. This file works with all Windows Versions.
ကိုလိန်း June 4, 2016 at 6:40 pm Reply
Window 8.1 and window 10 တွင် ဘယ်လို မြန်မာစာ ဒေါင်းလုပ်ရမလဲ အဲဒါထည့်ပေးပါလာ။
kyaw swa win March 13, 2016 at 2:02 pm Reply
all ok now!
မန်းရှားဖော့အွာ March 8, 2016 at 2:34 am Reply
YeKhAung August 19, 2016 at 1:46 pm Reply
ရတဲ့စက်မှာ ရနေတယ်..လိုက်ကြည့်တော့ ထူးတာလည်း မတွေ့ဘူး..တစ်ခုတော့ရှိတယ် viber မှာ မြန်မာလိုမြင်ရအောင် zawgyi အသွင်ပြောင်း arial ကိုအစားထိုးရင် ရနိုင်မယ်ထင်တယ်
san February 22, 2016 at 11:57 am Reply
ပါတ်ဆင့်ရေးလို့မရတာ ဘာကြောင့်လည်း ကူညီပေးကြပါ windows 10 pc မှာပါ
Samuel August 8, 2016 at 6:28 pm Reply
nannwai November 18, 2015 at 7:26 am Reply
I can’t see myanmar language in web browser as firefox/chrome , How could I Pls help me
Mg Myo February 15, 2016 at 9:49 am Reply
plases hele my too i have not tim
Ei Lay December 17, 2014 at 3:13 am Reply
no myanmar font in microsoft word 2013
my computer had zawgyi font but i do not get myanmar font , why?
please answer teacher
chyu November 28, 2014 at 11:42 pm Reply
I want to see myanmar font on viber what should I do???? Pleace help me.
kt November 18, 2014 at 3:57 pm Reply
thank u so much.very useful
Kyaw Myo Naing August 29, 2014 at 5:16 am Reply
facebook မှာမြန်မာစာ မြင်ရတယ်
frozen keybook ရှိတယ်
webbrowser တွေမှာ မြန်မာစာက ဘယ်လိုစာလုံးတွေမှန်းမသိဘူး
Su Min May 20, 2015 at 3:35 am Reply
အကို ရေးထားတဲ့ အတိုင်း အကုန်လုပ်ပါတယ် . comment ဖတ်ပြီးလည်းလုပ်ကြည့်ပါတယ် Firefox မှာ အရေး၊ အဖတ် အားလုံး အတုံးလေးတွေပဲပေါ်တယ် အကို … Chrome မှာ မြန်မာစာတွေက ရေးလို့တော့ရတယ် ဖတ်လို့မရပါဘူး ဘာလိုတွေပေါ်နေမှန်းကို မသိတာပါ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပေးပါဦးရှင့်…….
Admin May 20, 2015 at 8:38 am Reply
အပေါ်က post အောက်ဆုံးနားမှာ ပြသနာဖြေရှင်းရန် ဆိုတဲ့ အပိုင်းလေးကို ဖတ်ပါ
JAMES August 20, 2014 at 2:25 am Reply
ကျွန်တော်ကွန်ပြူတာမှာ မြန်မာလို MS Word မှာရိုက်လို့မရဘူး။ တခြားဆိုက်မှာ အဆင်မပြေဘူး။ ကူညီပေးပါလို့။
tabound July 22, 2014 at 7:05 am Reply
အကိုရေ အကိုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်..မြန်မာဖောင့်ကို facebook မှကောင်းကောင်းမြင်ရပေမဲ့ တခြားဆိုဒ်တွေကြည်တဲ့အခါမမြင်ရတော့ဘူး..ပြီးရင် window 64 ပါ ပြီးတော့ control panel မှာလဲ Zawgyi Myanmar Unicode L ကိုသွင်းထားမိတယ်
အဲတာunstill လုပ်ရင်မရဘူးပဲပြောနေတယ်…ပြီးတော့်firfox ကနေ မြန်မာလိုရိုက်ရင် အတုံးလေးတွေပဲပေါ်နေတယ်..opreation မှာလဲ zawgyi one font ပြောင်းထားတာကို မရဘူးဖြစ်နေတယ်..အကိုအဆင်ပြေရင် နည်းလမ်းပြောပြစေချင်ပါတယ်..
Admin July 22, 2014 at 1:48 pm Reply
ဒီဆိုက်က Zawgyi Unicode install ထပ်လုပ်ပါ control panel > Region > keyboard and Language > Change Keyboard > General (Add) English (United States) keyboard Alpha Zawgyi + Zawgyi Myanmar Unicode L နှစ်ခုလုံး check လုပ်ကြည့်ပါ Firefox Option မှာ > content > Advanced ကိုသွားပြီး အကုန် Zawgyi one ပြောင်းပါ
toelay July 19, 2014 at 2:43 am Reply
download လုပ်ပီး desktop ပေါ်မှာမြန်မာစာမပေါ်ဘဲ အတုံးလေးတွေပဲဖြစ်နေတယ် ကူညီပါအုံး……
Ei San July 2, 2014 at 1:56 am Reply
I’m not use myanmar font in gmail , excal , facebook and viber.
So, pls help me.
sothu June 22, 2014 at 12:11 pm Reply
ဆရာကျွန်တော်ကွန်ပြူတာစက်ထဲကြ မန်မာသီချင်းတွေမြန်မာစာ ဖတ်လို့မရလို့ဆရာနောက်ပြိးတော့ အင်တာနတ်မှာစာရေးလို့ရတယ် အကွက်ပေါ်နေတယ် စာတော့ရေးလို့ရတယ် pcမှာလက်ကွက် မရှိဘူးပျောက်နေတယ် ဆရာ
Latt June 22, 2014 at 1:12 pm Reply
Control panel > Fonts folder ကို ဖွင့်ပြီး Zawgyi one ရှိသလား စစ်ကြည့်ပါ မရှိရင် ဒီ post အပေါ်ဖက်မှာ Zawgyi font ကို သီးသန့် download လုပ့် ပါ ပြီးရင် အဲဒီ zip file ကို ဖွင့် Zawgyi font ကို ထပ် ဖွင့်ပါ၊ Zawgyi font box ကလေးပေါ်လာရင် အပေါ်နားမှာ install ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီး စက်ထဲကို သွင်းပါ
လဈမှနျ May 24, 2014 at 7:34 am Reply
cherish June 21, 2014 at 3:01 am Reply
I am wondering why i can not Install Myanmar font for reading or even for Typing.
Is because my Laptop is Samsung ?
Some told me that it is not possible with samsung .. Can you give me any advice for my laptop how to do it , please.
I need to read and write it too.
Latt June 21, 2014 at 3:49 am Reply
It is nothing to do withabrand. May be you are using Windows 8. Are you using Chrome-book? If you are using windows 8, You have to install Zawgyi in Desktop mode, not in the Tile mode. You also have to use Internet browser in Desktop mode too. Just like in Windows 7. It isalittle complicated. Tile mode is touch friendly, browsers are different from regular Desktop mode.
Htun Zan Wai March 7, 2014 at 12:46 pm Reply
Window 8.1 တွင် Zawgyi font download (ဘတ်/ရိုက်) ထည့်သွင်းနိုင်ရန်နည်းလမ်း
ကျေးဇူးတင်လျှက် – ထွန်းဇံဝေ
min pyaine oo March 16, 2014 at 1:49 am Reply
myanmar sar ya chan lo par bal lo laot ya ma lae
Kolay March 6, 2014 at 12:48 am Reply
My name is kolay, could u please do meafavor, i am using windows 8 , and i can see Myanmar fonts but i cant write it. ( In Mozila ) Please , if u have any ideas send on this address .. alaynusu@gmail.com.
With much respect
Ko Ko Phone February 28, 2014 at 9:11 am Reply
အစ်ကိုတို့ရေ … အခုနော်က်ဆုံးထွက် Chrome 33. x.xxx.x မှာ ဇော်ဂျီက မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ယပင့်နဲ့အသတ်တွေ နေရာလွဲနေတယ် အဲဒါ ဘယ်လိုများ လုပ်သင့်ပါသလဲခင်မျာ။ chrome v32.x.x.xxx.အထိ အိုကေတယ်။ ၃၃ မှာ စ တွေ့တာပဲ။ ဒေါင်းဂရိတ်ပြန်မဆင်းချင်ဘူးလေ။ Chrome က သူ့ဗားရှင်းတွေကိုထပ်မြှင့်မှာဆိုတော့ ….။ ဇော်ဂျီပရိတ်သတ်တွေ အခက်တွေ့မှာ စိုးလို့ ။ ဖုန်းအတွက်တော့ ယပင့် အသတ်တွေအဆင်ပြေသလို ဝင်းဒိုးစ်အတွက်လည်း OK ချင်ပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ Developmer တွေကို အားကိုးပါတယ်။
nyan lin tun February 24, 2014 at 1:13 am Reply
ဆရာ . .ကျွန်တော့်မှာ မြန်မာလို စာစီစာရိုက်လုပ်က စာလုံးအဆင့်တွေရိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒါကိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါ။ အဲဒီစာလုံးဆင့်ရိုက်လို့မရတာနဲ့ကျွန်တော့်မှာ တော်တော်လေးကိုအခက်တွေ့နေပါတယ်.
Wunna February 15, 2014 at 11:41 am Reply
အကို… ကျနော့်ကွန်ပျူတာ firefox မှာ အစကမြန်မာလိုအားလုံးမြင်ရပါတယ်… အဲ့ဒါနဲ့ viber တင်ပြီး မြန်မာလိုမမြင်ရလို့ဆိုပြီး arialzawgyifont ကို ဒေါင့်လုပ်ပြီး fontfolder မှာ ကော်ပီလုပ်လိုက်တယ်.. ပြီးတော့ friefox မှာ မြန်မာလို့အကုန်မပေါ်တော့ဘူး တချို့လောက်ပဲပေါါ်တော့တယ် …ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့လို့ပါ… ကူညီပေးပါဗျာ….
bawithang February 9, 2014 at 11:27 pm Reply
eikho January 24, 2014 at 11:00 am Reply
sir, I have already installed Myanmar zawgyi font in my computer but I cannot write, only can read. please help me
ွှThura January 19, 2014 at 8:08 am Reply
Thura Aung January 19, 2014 at 5:02 am Reply
mya win January 12, 2014 at 10:34 am Reply
web page ပေါ်မှာတော့ မြန်မာလိုမြင်ရပြီး bookmark နဲ့ save file တွေမှာ မြန်မာfont တွေ မမြင်ရတော့ဘူးခင်ဗျား ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ။
Thida Nyein January 11, 2014 at 6:44 am Reply
ကျွန်မကwindow764 Bit သွင်းထားတယ် အစကzawgyi font သွင်းပြီးပြီ ရိုက်လိုမရဘူး zawgyi Unicode winRAR download လုပ်လိုက် မြန်မာစာ ရိုက်လိုရပြီး ဒါပေမယ် Mozilla Firefox Browser မှ မြန်မာစာ အကွက်ဖြစ်နေတယ်
အပေါ်မှ ပြထားတယ်အတိုင်း Mozilla Browser > Option>font/color > Zawgyi font ကို Default လုပ်ပြီးပြီ လဲ မရဘူး မြန်မာစာလဲအကွက်ဖြစ်နေတုန်ပဲ ဘယ်လို လုပ်လိုရသေးလဲ
anonymous January 3, 2014 at 9:59 pm Reply
I need zawgyi keyboard for windows rt . Will u help me ?
သက်လွင် November 26, 2013 at 2:12 am Reply
ကိုထွန်းလင်း ကျနော်ခုပဲ ဇော်ဂျီဖောင့် လိုအပ်လို့ လာယူတာ
ဒီ UNOB web site ကိုရှင်သန်နေအောင် ဆက်လက် ထိမ်းသိမ်းထားပေးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် တနေ့မှာကျနော်တို့ အရင်လိုစုပေါင်းပြန်လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျော်လင့်မိပါတယ်
nyi nyi November 18, 2013 at 3:57 pm Reply
thz u very much…. wish u more success ….
theinlwinhtay November 9, 2013 at 12:50 pm Reply
Ahtar November 5, 2013 at 2:29 am Reply
Really thanks …. I was trying to install Zawgyi to my new PC , it took so many hours, but it didn’t work. Now I can install and use it after reading this web and downloading file. Thanksalot !
ငွေသိန်း November 2, 2013 at 12:58 am Reply
ကွန်တော်ကတော့ line မှမြန်မာစာသုံးလုံးမရဘူးဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ?
Blaise September 30, 2013 at 7:14 am Reply
Please help, how to install zawgyi myanmar font on window8 surface RT
kyaw hoe September 27, 2013 at 10:13 pm Reply
I would like to install myanmar font on iphon5 ( version iSO 7.0.2). Could you please help me.
Administrator September 28, 2013 at 7:41 am Reply
Try Mogok browser from App Store. You have to use that browser to read/write Burmese. For an example, use Facebook.com, gmail.com in that browser. That is the simple way. Another way is you have to know how to perform Jailbreaking.
shwe sin September 25, 2013 at 3:38 am Reply
ညီမကွန်ပြူတာက firefox gmail မှာမြန်မာလို့ရိုက်လို့မရဘူး။
Administrator September 25, 2013 at 7:58 am Reply
ရိုက်လို့မရတာကတော့ Unicode keyboard ကို ပြန်သွင်းဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Firefox Internet Option ထဲမှာ Default font ကို Zawgyi ပြောင်းပေးပါ။ အောက်ဖက်က comment ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။
hanthihtun September 6, 2013 at 5:06 am Reply
gtalk မှာမြန်မာလိုရပါတယ် firefox မှာ wikipedia font ကြီးဖြစ်နေတယ် ဆရာ ကူညီပါဦး
Administrator September 9, 2013 at 8:29 pm Reply
Try this: Firefox > Tools > Options > Content > Default font > (change to “Zawgyi-One”)
also try this: Content > Default font > Advanced (change all to “Zawgyi-One”. Especially “Sans-serif” to Zawgyi )
hanthihtun September 12, 2013 at 3:53 am Reply
zayya September 6, 2013 at 1:57 am Reply
ကျွန်တော်ကွန်ပျုတာမှာ ဂျီတော့နဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ မြန်မာဖောင့် သုံးမရလို့ကူညီပါဦး
aungzawmyint September 1, 2013 at 12:43 pm Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို အရမ်းရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီထက်မက တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
Chaw September 1, 2013 at 2:30 am Reply
အရမ်းအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်တာပါပဲ။ ကြိုးစားနေတာကြာပေမယ့် အခုမှပဲ ရပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးထပ်တင်ပါတယ်။
nangkham khaing August 28, 2013 at 8:40 am Reply
Kyaw Lone August 16, 2013 at 11:31 am Reply
်Facebook မှာကျတော့ မြန်မာစာာမြင်ရတယ် Gmail မှာကျတော့ မမြင်ရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါအုံးဗျ
Administrator August 16, 2013 at 11:59 pm Reply
သုံးနေတဲ့ Browser (IE, Firefox or Chrome) setting ထဲမှာ Font ကို Zawgyi ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ အပေါ်က post ထဲမှာ သေချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။
aung aung August 10, 2013 at 6:26 pm Reply
Thanks for helpful advice
popo August 5, 2013 at 9:18 am Reply
usob mar win pi download tar ma yah loako myar keybook lay por la aung bel lo load ya ma lel pyaw puya pay pa myin nay yah pi yea lo. ma yah. phit nay lo.pa please
Administrator August 5, 2013 at 11:15 pm Reply
Download “Unicode”. Open the downloaded file, double click on “Setup”. wait and follow the instruction. Once it says “Installation is completed”. Keyboard icon will appear on notification area.
khochai July 23, 2013 at 11:44 pm Reply
ကျနော့် microsoft office word မှာရေးတဲ့အခါ အတုံးလေးတွေဘဲပေါ်လာတယ်၊ စာသား မမြင်နိုင်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါအုံးနော်…မျှော်လင့်လျှက်
Administrator July 24, 2013 at 2:23 pm Reply
Word ရဲ့ MENU BAR ထဲက Font selection မှာ Zawgyi ကိုအရင်ရွေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Keyboard language မှာ Zawgyiေ၇ွးပြီးမှ ရိုက်လို့ရပါမယ်။
khochai July 23, 2013 at 2:17 pm Reply
i am using window7ultimate, i install zawgyi font, i can read all myanmar letter but i can not write. i used shift + chrl but nothing changed. pls help me
Administrator July 23, 2013 at 7:30 pm Reply
You have to download Unicode installer. Then install it by double clicking “Setup”. You will seeasmall keyboard icon at notification area as language selector. You can choose Eng or Zawgyi whatever you like to use.
utheintun July 2, 2013 at 9:03 am Reply
ဗုဒဓ ပတ်ဆင့်ရိုက်လို့ပရပါ keyboardလက်ကွက်အတိုင်းရိုက်ပါတယ်အကူအညီပေးပါအုံး
Administrator July 2, 2013 at 11:58 pm Reply
အပေါ် post ထဲက Keyboard လက်ကွက်ပုံစံထဲမှာပဲ ဘယ်လိုရိုက်ရမယ် ပါ ပါတယ်။
ဥပမာ – ဗုဒ္ဓ (shift + ~ + ‘ ) သုံးခုတွဲ ရိုက်ရင် ထွက်ပါတယ်။
utheintun July 6, 2013 at 6:07 am Reply
htet aung June 27, 2013 at 1:48 am Reply
On facebook,i can read myanmar font but i can`t write myanmar font. What should i do???
linkyaw June 2, 2013 at 5:12 am Reply
no zawgyi fonts
Administrator June 2, 2013 at 7:43 am Reply
Hi please go to following link,
Khae Shiam May 13, 2013 at 2:08 am Reply
Hi…”I have any problem about font. you know ..last month i could use it the whole months. but right now what happen i haven’t no idea i just can’t used .when i type the word it’s appeared like tiny square. and i set that in language bar also it’s just can’t. So could u explain me about that? what any else require and how to i fix back. Pls…help me. if u could have spare time reply me in this mail. (nawnicham@gmail.com) TQ!
Hinnsi May 2, 2013 at 3:02 am Reply
ကျမ Mac Book Air OS X သုံးပါတယ်။ အရင်က ဇော်ဂျီfont သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ အခု Firefox အသစ်က Auto up loadဖြစ်သွားပြီကတည်းက Firefoxမှာ ဇော်ဂျီfontကို ဖတ်လို့ရေးလို့မရတော့ပါ။ Safariမှတော့ အနည်းငယ်ဖတ်လို့ရေးလို့ရပါတယ်။ ရရင့်တွေ ယပင့်တွေကတော့ safariမှာလည်း အမှန်အတိုင်းမမြင်ရပါဘူး။ Safariထဲက preference ထဲက သွားပြီး font 2ခုစလုံးကိုလည်း ဇော်ဂျီပြောင်းပြီးပါပြီ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Administrator May 2, 2013 at 7:49 pm Reply
Firefox ကို 17 ver. Down grade လုပ်ပါ။ ပထမဆုံးမသုံးခင် internet ကို ဖြုတ်ထားပါ။ Firefox preferences> Advanced > Update မှာ Automatically install updates ဆိုတာကို ဖြုတ်ပြီး တခြားဟာ ပြောင်းထားပါ။ ပြီးမှ internet ပြန်ချိပ် သုံးပါ။
down grade လုပ်ဖို့ ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Font book ထဲက zawgyi ကလွဲရင် တခြား မြန်မာ fonts တွေ ဖယ်ထုတ်ပေးပါ။ (Application> font book)
Hinnsi May 6, 2013 at 1:22 am Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျမ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
sony November 22, 2015 at 11:38 am Reply
win April 29, 2013 at 8:03 pm Reply
အကုို ကျနော်. computer က Macbook OS X 10.8 ပါ
ကျနော်. zawgyi font သွင်းပြီးပါပြီး ဒါပေမဲ့ ကျနော် facebook ,gmail တုို.မှာစားရေးတဲ့အခါ ရေးလုိုက်လုို.ရှိရင် စာလုံးက တစ်လုံးနဲတစ်လုံးပူးနေတယ်။ စာဖတ်လုို.လဲ မရဘူး။ အဲဒါလေး ကူညီးပေးပါလုို. ပြောချင်ပါတယ်
Administrator April 29, 2013 at 9:02 pm Reply
remove all Myanmar fonts from the Font Book except Zawgyi-one font. Then restart your MAC.(Applications > Font Book)
po pyae April 22, 2013 at 10:34 am Reply
Interenet Exporler မှာမမြင်ရဘူး…..
Administrator April 22, 2013 at 12:11 pm Reply
Hi! internet Explorer’s Menu (at the top)
(1st Step) Tools >Internet Option >General >Fonts (change Zawgyi-One Font, then click “OK”)
(2nd Step) Tools >Internet Option > General >Accessibility (select the “Ignore the Font styles specified on Web Page
Please read the post for more troubleshooting tips.
po pyae April 22, 2013 at 10:30 am Reply
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာက 64 bit ပါ
Thazin April 18, 2013 at 1:23 pm Reply
ညီမ laptop က window7ultimate ပါ
ဒါပေမယ် Folder မှာ Rename ပေး၇င် လေးထောင့်ကွက်တွေပဲပေါ်နေတယ်
Administrator April 20, 2013 at 9:47 pm Reply
system font ကိုပြောင်းပေးရပါမယ်။ လောလောဆယ် MAC computer သုံးနေတော့ ဘယ်ကနေဘယ်လိုလုပ်ပါဆို ပြောပြရခက်နေပါတယ်။
Mg Mya Phay June 12, 2014 at 1:00 pm Reply
အဲ … မေးထားတာ အတော်ကြာပြီဆိုတော့ ရသွားလောက်ပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေ တွေ့ရင် အသုံးတည့်မယ်ထင်လို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Right Click on Desktop>Personalize>Windows color>Icon>Zawgyi-One in Font
LeaveaReply to zayya Cancel reply
Download Zawgyi Font (1) Open “SAFARI BROWSER” on your iPhone or iPad (2) Click Here to
The 25 Best (Free) iPhone Apps
Smart Phone ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက အဲဒီလို (Extended Functionalities) အဆုံးမရှိတဲ့ Idea အသစ်တွေ တိုးချင်သလောက် တိုးလာနိုင်အောင် ပို အသုံးတည့်လာအောင် ကြိုးစားလုပ်ထားကြတာ၊
Win on Donation ဦးခင်မောင်သိန်း ဒေါ်စူဆန်သိန်း မိသားစုမှ အလှူငွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းGod bless you all
Hkun Soe Myint on Zawgyi Font inaMAC OS(Apple) VideoEven though I have changed my Zawgyi font and keyb…
min yoongi on Download Zawgyi Font and Firefox Browserကျနော်zawgyi fontဘယ်လိုထည့်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ် ကျေ…
zinminaung on Zawgyi Font and Myanmar Keyboard for iPhone and iPadကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရေ
ko on Download Zawgyi Font and Firefox Browsercant see mm font at telegram app
Ma Win Min Thant on Download Zawgyi Font and Firefox BrowserViber မှာ မြန်မာ font ရိုက်ရင် ကျနော် ရိုက်ရင် ဂျာ…
ကျော်ထွေး on Zawgyi Font inaMAC OS(Apple) Videoဟုတ်ကဲ့ ရသွားပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
Post Archives Select Month October 2020 (1) June 2020 (1) October 2019 (2) April 2019 (1) March 2019 (1) July 2015 (1) March 2014 (1) October 2013 (1) August 2013 (1) July 2013 (1) June 2013 (1) April 2013 (1) March 2013 (2) December 2012 (1) November 2012 (1) October 2012 (1) September 2012 (3) August 2012 (4) July 2012 (2) June 2012 (2) May 2012 (2) March 2012 (1) February 2012 (3) January 2012 (4) October 2011 (3) September 2011 (5) August 2011 (4) July 2011 (2) June 2011 (2) February 2011 (1) January 2011 (2) October 2010 (4) August 2010 (8) July 2010 (4) June 2010 (4) May 2010 (7) April 2010 (2) March 2010 (2) February 2010 (4) January 2010 (6) December 2009 (7) November 2009 (3) October 2009 (6) September 2009 (4) August 2009 (9) July 2009 (2) August 1232 (1) August 102 (1)
© 2020 United Nationals of Burma (USA). All Rights Reserved.